Madxwaynaha Kilalka oo ku Baaqay “Jihaad” ka Dhan ah Al Shabaab. – Rasaasa News
Madxwaynaha Kilalka oo ku Baaqay “Jihaad” ka Dhan ah Al Shabaab.
Jijiga, June 17, 2014 – Madaxwayne Cabdi Iley, oo ugu baaqay dadwaynaha degaanka in ay qaadaan dagaal ka dhan ah, ururka Al Shabaab, Iyada oo ay mudooyinkanba Maleeshiyada Liyuu Boolisku ka dagaalamayaan gudaha dalka Somaliya.
Madaxwayne Cabdi Iley, oo la hadlayey dad laga soo uruuriyey degmooyinka Ismaamulka Somalida Itobiya, ayaa sheegay in ay la dagaalamayaan ururka Al Shabaab. Laakiin ma uusan sharxin sababta, uu ugu baaqayo dadwaynaha degaanka dagaalka Al Shabaab iyo meesha ay kula dagaalayaan.
Madaxwayne Cabdi Iley, oo aad loogu bartay gulufka dagaal ee ka dhanka ah gobonimodoonka ONLF, ayaa sanooyinkii ugu dambeeyey magaciisu caan ka noqday dhamaan degaanada Somaliyeed.
Waa markii ugu horaysay ee madaxwayne Cabdi Iley ka hadlo, wax ka baxsan Ismaamulka Somalida Itobiya, isaga oo waliba dadwaynaha degaanka ugu baaqaya in ay ka dagaalamaan gudaha dalka Somaliya.
Arinta uu ku baaqay madaxwayne Cabdi Iley, waa arin xaas xaasi ah, oo khatarteeda leh keenina karta in dadwayanha Jamhuuriyada Somaliya ay si kale u arkaan kana xumaadaan. Ismaamulka Somalida Itobiya, ma aha mid madaxbanaan, manaha mid ka shaqeeya danaha Somalida, waana arin laga naxo in Atobiya ay u isticmaasho waxyeelada dal Somaliyeed oo xor ah.
Hadaba, waxaa la iswaydiin karaa maxay tahay sababta keentay ololahan cusub ee uu bilaabay madaxwayne Cabdi Iley?
Dad badan baa waxay leeyihiin ololaha Cabdi Iley, waa arin siyaasadeed oo ay ka dambayso Atobiya, oo ah sidii ay ciidameedu ku joogi lahaayeen dalka Somaliya. Madaxwaynaha Somaliya ayaa dhawr goor oo hore sheegay in mudadda joogitaanka ciidamada Atobiya ee dalka Somaliya ay tahay 18 bilood, oo lix bilood tagtay. Arintaas waxaa diiday Raysalwasaaraha Atobiya, oo yidhi “inta Al shabaab hal ruux ka nool yahay ciidamada Atobiya way joogi Somaliya.”
Bishii hore ayey Maleeshiyada Liyuu Boolisku galeen gudaha dalka Somaliya, iyaga oo qabsaday todoba  magaalo, halkaas oo ilaa iyo hada ay joogaan. Sababta galitaanka Maleeshiyada Liyuu Booliska ee dalka Somaliya, ayaa lagu sheegay in ay timid, ka dib kolkii ay Al Shabaab, dhawr ruux ku dileen tuulada Aato. Aato waa tuulo ku taal xadka oo ay leedahay Somaliya, laakiin hada waxaa sheegtay Atobiya.
Arinta kale Atobiya doonayso, ayaa ah in ay xidhiidh u samayso ONLF iyo Al shabaab, iyada oo adeegsanaysa madaxwayne Cabdi Iley iyo maleeshiyada Liyuu Booliska.
Madaxwayne Cabdi Iley, ayaa kulanka Jijiga ka socda dadka hor keenay dhalinyaro Somali ah oo uu sheegay in ay yihiin ONLF iyo Al Shabaab, laguna soo qabtay dagaalkii ka dhacay degmooyinka dalka Somaliya.
Dadka qaar ayaa waxay leeyihiin; Al shabaabku waxay Atobiya ka dileen ciidan badan, wayna adagtahay in ciidanka Atobiya ka dagaalamo dhul Somaliyeed oo miyi ah, sida ay horeba ugula dagaalami waayeen gabalka Ogaden ururka ONLF.
Ciidanka Atobiya waxaana lagu xoojiyey AMISOM, si ay deg deg ah wax uga qabtaan gabalada fog fog ee xidga xadka Atobiya.
Hadaba Atobiya, waxay lexejeclaysanaysaa ciidanka federalka, ee ka midka noqday AMISOM, kuwaas oo qaata lacago badan. Waxaana sida la aaminsan yahay ay rabtaa in ay ka faa,iidaysato maleeshiyada degaanka Somalida ee Liyuu Booliska, kuwaas oo dhimashadooda ayna Atobiya uga duwanayn Al Shabaab.
Isku soo wada duub, in maleeshiyada Liyuu Booliska oo hal beel u badan ay galaan dalka Somaliya, waxana ku yeelaan dad Somali ah, waxay la mid tahay dhacdadii dagaalkii SNM ay la gashay dawladii Maxamed Siyaad Bare 1988, dagaalkaas oo laga horgeeyey dhalinyaro laga ururiyey xeryihii qaxootiga dalka Somaliya oo ay ku jireen dadk ka soo cararay Atobiya dagaalkii 1977.
Shacabka Somalida Ogadeeniya, raali kama ah falalka xasuuqa ah ee la sheegay in Liyuu Boolisku, ugu gaysanayaan dad shacab ah gudaha dalka Somalida.
Breaking News Kenya: 15 killed in fresh Mpeketoni attack
Uganda dispatches 1,440 troops to Somalia